Socdaalka kaligaa: tilmaamaha ugu sareeya iyo meelaha aad ku raaxeysan karto | Ragga Stylish
Dad badan ayaa laga yaabaa inay diidaan inay kaligood safraan. Si kastaba ha noqotee, inaad kaligaa la safarto naftaadu waxay noqon kartaa waayo-aragnimo lama iloobaan ah, oo aad u hodan ah oo xitaa balwad leh. Waxaa jira faa iidooyin fara badan oo kaligood safraya. Mid ka mid ah ayaa ah inaad naftaada sifiican u garato oo aad hesho xorriyad aad ugu maamuli karto safarka qaab kasta oo aad rabto.
Si kastaba ha noqotee, si aad u safarto waa inaad kaliya tixgelisaa tilmaamaha qaarkood si aan safarka ugu beddelin dhibaato. Waa muhiim in la raaco talooyinka hoosta lagu bixin doono.
1 Talooyin ku saabsan safarka kaligaa
1.1 Ka faa'iideyso dalabyada kaligaa safraya
1.2 Hayso xiriirka
1.3 Qorshee wadada
1.4 Baadhitaan ku samee qaabka barokaca
1.5 Xifdi hareeraha
1.6 La kulan dadka
1.7 Maamul waqtiga firaaqada si aad kaligaa u safarto
2 Meelaha ugufiican ee safarka keli ah
2.4 Reykjavik inuu kaligiis safro
Talooyin ku saabsan safarka kaligaa
Ka faa'iideyso dalabyada kaligaa safraya
Waxaa jira wakaalado safarro badan oo qiimo dhimis weyn ku sameeya kuwa kaligood safraya. Meelaha ugu badan ee ay raadsadaan dadka safarka ah ayaa ah Amsterdam, Dublin, New York ama Bangkok.
Waxaa muhiim ah inaad si wanaagsan isu diyaariso oo aad ogaato halka aad u socoto ee aad u socoto. Waxaa si fiican lagugula talinayaa inaad raadiso dhammaan macluumaadka suurtogalka ah ee ku saabsan meesha aad u socoto iyo caadooyinkeeda kahor. Sidan oo kale, waxaad si aan fiicnayn u tagi kartaa si ka fiican oo aanad soo jiidan karin dareenka. Siyaabahan ayaa ka fogaan kara dhibaatooyinka dadka deegaanka.
Xaaladda ay ku jirto maamulka tallaalka loo baahan yahay, ka ogow sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Luqadda iyo lacagta waa in si fiican loo yaqaan si aan dhibaato loo siin helitaanka alaabada. Baasaboorka, kaarka aqoonsiga, iwm. Waa dukumiintiyo ay tahay in lagu soo diro emayl si ay gacanta ugu hayaan waqti kasta ama haddii ay dhacdo xatooyo.
Waa inaad ogeysiisaa kuwa kuugu dhow qorshayaasha aad haysato. Ka warbixi hudheelka aad dagi doonto. Sidoo kale muhiim baraha bulshada ka dhig mid firfircoon si loo tuso ehelka iyo asxaabta goobta.
Ugu yaraan maalmaha ugu horreeya, waa inaad raacdaa waddo horey loo qorsheeyay. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si wanaagsan u maamusho aagga oo aad u dareento xasilooni dheeraad ah. Waa inaad qorshe sameysataa waqtiga imaatinka garoonka diyaaradaha, cinwaanka hoteelka iyo fogaanta meelaha dalxiiska.
Baadhitaan ku samee qaabka barokaca
Iyadoo safarka la diyaariyey, macluumaadka ku saabsan gaadiidka waa in la raadiyaa. Waa la sameyn karaa hal mar halkaas, laakiin waxay keydineysaa waqti badan markii la wada qabtay. Waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad ka fogaato dabinnada dalxiiska iyo khiyaanooyinka.
Waa run oo markaad safarto wax waliba waa cusub yihiin. Laakiin noqoshada goobjooge waligood waxba ma yeeli doonaan. Haddii aad si cad u xafiddo aagaggii aad ku soo martay, way ka sii dhib badan tahay inaad lumiso. Waxaa lagu taageeri karaa sawirro.
La kulan dadka
Socdaalka kaligaa waa mid ka mid ah fursadaha ugu weyn ee saaxiib lagu yeesho. Markaad keligaa safreyso, waxaad u badan tahay inaad bilowdo wadahadalka shisheeyaha. Waa wax caadi ah inaad la kulanto koox dad ah oo keli socdaal ah. Hoteelka dhexdiisa, xarumaha dalxiiska ama xitaa fagaarayaasha iyo jardiinooyinka, had iyo jeer waxaa jira dad aad la hadli karto.
Maamul waqtiga firaaqada si aad kaligaa u safarto
Xaqiiqdii waxaa jira waqtiyo dhimis safarka ah. Sugitaanka safafka, gaadiidka dadweynaha, iwm. Inta lagu jiro waqtigan maqnaanshaha, waxaa lagugula talinayaa inaad haysato wax aad qabato waqtiga firaaqadaada. Waad aadi kartaa dukaamaysiga, booqan kartaa meelaha dhaqanka oo aad lugeyn kartaa. Fikradda wanaagsan waa inaad sameysid xusuus-qor safarka ah oo aad ku duubto waayo-aragnimadaas hodanka ah ee keligaa safraya.
Waxaa jira meelo badan oo lagu booqan karo kalidaa si loo helo khibrado wanaagsan. Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno shan meelood oo loo safro kaligood.
Meelaha ugufiican ee safarka keli ah
Waa magaalada Waqooyiga Ameerika ee heer sare ah. Ugu yaraan hal mar noloshiisa waa inay soo booqdaan dhammaan dadka jecel inay safraan. Waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo jinsiyado iyo jinsiyado ah oo ka dhigaya magaalo dhaqammo kala duwan oo aad u xiiso badan oo madadaalo leh.
Waxa ugu weyn ee la booqdo markaad timaaddo New York Waa Central Park in lagu fuulo dhismaha Boqortooyada Boqortooyada. Aadida Taalada Xorriyadda ama ku dhex lugeynta Galbeedka Tuulada ama Times Square waa howlaha ugu caansan dalxiisayaasha. Qof kasta oo taga wuxuu kugula talinayaa cunista mid ka mid ah eeyaha kulul ee caanka ah ee lagu iibiyo meheradaha waddooyinka.
Marka laga reebo qorshooyinka caanka ah, waxaa jira waxyaabo kale oo aan badnayn oo caan ah. Si kastaba ha noqotee, weli waa meelo wanaagsan oo la booqdo. Waxaan u tagi karnaa Top of Rock, oo dusha sare ee Xarunta Rockefeller ay leedahay aragtiyo aan caadi aheyn oo magaalada ah sida Boqortooyada Boqortooyada.
Waa caasimadda Thailand waana meel ku habboon haddii aad keligaa safarto. Meeshan waxaad ku baran kartaa dhaqan gebi ahaanba ka duwan kuweenna. Adoo kaligaa safraya waxaad awoodi doontaa inaad si fiican ugu quusto caadooyinka si aad u ogaatid gebi ahaanba. Waxa ugu badan caasimada Thailand waa dhismayaal diimeed. Waxaan leenahay Qasriga Weyn, Macbudka Shakiga Emerald iyo, xoogaa ka sii fog, Wat Arun, sidoo kale loo yaqaan magaca Macbadka Dawn.
Waxyaabaha ka muuqda Bangkok waa suuqyada. Badanaa way ka buuxaan dad iyo alaabooyin aan ka helno in kabadan 8.000 oo boos. Waxaa laga yaabaa inay kaa sii yaabiso maxaa yeelay, suuqa ka sarreeya, waxaa jira qad tareen oo shaqeeya. Markuu tareen yimaado, waddooyinka tareenka ayaa la soo ururiyaa ka dibna mar labaad ayaa la kala qaadaa.
Meeshani muhiim ayey u tahay dadka jecel qarsoodiga iyo dhaqanka. Hadaad kaligaa safarto waad aadi kartaa Castle Dublin iyo Katidral St. Patrick. Waxaa jira matxafyada qaar sida Madxafka Qadiimiga ah ee Qaranka ama Matxafka Farshaxanka Casriga ah halkaas oo aad saacado ku qaadan karto ku faraxsanaanta dhaqanka.
Haddii aad jeceshahay qarsoodiga waxaa jira safarro hagitaan oo bilaash ah oo lagu barto halyeeyada magaalada iyo meelaha ay ka jireen dhacdooyinka aan caadiga ahayn sida Forty Steps Alley ama magaaladii hore ee Viking ee Wood Quay.
Reykjavik inuu kaligiis safro
Waa caasimada Iceland waana meel dalxiis ku cusub. Waa magaalo xoogaa kayar oo ay ku nool yihiin qiyaastii 130 oo qof laakiin waxaan ku siin karaa joogitaan wanaagsan oo kaligaa ayaad safri kartaa. Meelaha ugu booqashada badan Reykjavik waa kaniisada Hallgrímskirkja, Tiyaatarka Qaranka iyo kaniisada weyn.
Duleedka waxaad ka heli kartaa Matxafka Dadweynaha ee Arbaer halkaas oo aad ku baran doontid dhaqamada iyo caadooyinka soo jireenka ah ee magaaladan Iceland. Mid ka mid ah sababaha socdaalku u yimaadaan meeshan waa in la arko Nalalka Waqooyiga. Waa bandhig gaar ah adduunka oo idil.
Ugu dambeyntiina, Amsterdam waa caasimadda Nederland waana meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay socdaalka keli ah. Xarunteeda taariikhiga ahi waxay leedahay wadiiqooyin fara badan oo la mari karo, sidaa darteed, waxaa loo yaqaan 'Venice of the North'. Kuwa ugu badan ee lagula taliyaa waa safarrada habeenkii. Matxafka Van Gogh oo shaqooyin badan ka bixin doona Rembrandt, Vermeer ama Hals.
Fagaaraha ugu mashquulka badan Amsterdam waa Leidseplein, oo ah meesha ugu fiican ee wax lagu cuno ama lagu cuno.
Socdaalka kaligaa wuxuu noqon karaa waxqabad aad uqurux badan naftaada. Shantaan meelood ee safarka keli ahi kuma deyn doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Safar kaligaa
Saaxiibada sunta ah